China PVC Coated Hexagonal Iron Wire Netting umzi-mveliso kunye nababoneleli |XINTELI
Isiko elenziwe ngeHexa elivuthelweyo...
I-PVC eluhlaza egqunywe ngoKhuseleko E...
Iheksi yocingo lokukhusela izilwanyana...
Umgangatho oPhezulu weSquare Wire Me...
Umnatha oDidiweyo wocingo oneD eshushu...
PVC Coated Hexagonal Iron Wire Networking
Ucingo lokulinganisa: 0.9mm ~ 2.0mm
Ubude: 5m, 10m, 25m, 30m, njl.
Ububanzi: 0.5m ~ 1.5m
Iimpawu:Ukumelana nokukhula, ukuxhathisa umhlwa, ukuxhathisa i-oxidation, idityaniswe ngokulula.
Phawula:Ubungakanani obungaphandle kobo bukhankanywe ngasentla mhlawumbi benziwa ukuba baodolwe emva kokuqinisekiswa.
I-Pvc yokwambathisa i-hexagonal mesh yocingo eyaziwa ngokuba yi-chinken netting.I-Pvc egqunywe nge-hexagonal wire wire yenziwe nge-carbon steel ephantsi yocingo. ukwandisa ubomi benkonzo yenethiwekhi, i-anti-ultraviolet, i-anti-aging and weathering role.Ukukhethwa kwemibala eyahlukeneyo kunokuhombisa indawo engqongileyo.Ngoko ngokuqhelekileyo, umbala odumileyo uluhlaza.
Umnatha wocingo lwePlastiki olunehexagonal njengohlobo lwekhusi, olusetyenziswa kakhulu kushishino lwepetrochemical, ulwakhiwo, iaquaculture njalo njalo. Njengokwakhiwa kweendonga ezisisigxina, ukomelezwa kwepleyiti yekhonkrithi emgangathweni, ukugcinwa kobushushu, ukugqunywa kobushushu; ,i-antifreeze,ukhuselo lwekhusi,ukhuseleko lokwakheka komhlaba.Ingasetyenziselwa ukukhulisa iinkukhu,amadada,imivundla kunye nazo naziphi na ezinye iintlanti zezilwanyana.
Uhlobo lweShishini:Factory&Nkampani yoRhwebo
IiMveliso eziPhambili:I-Wire Mesh, ucingo lwentsimbi
Unyaka wokusekwa: 2008
Isiqinisekiso: TUV, ISO9000
Indawo: Hebei, China (kuMazwe)
ikheji yeenkukhu, ucingo lwegadi, indawo yokudlala yabantwana, imihombiso yeKrisimesi.
Ukusebenzisa okufanelekileyo, ubomi benkonzo ende, amandla okhuseleko aphezulu, gcina iindleko zokuhamba, ukuguquguquka okulungileyo.
Ukupakisha kunye noThumelo
Ixesha elikhokelayo: 15 ~ 30days
Iipakethi:a.Kwimiqulu, isongwe ngephepha elingqina amanzi okanye ishwabene isongelwe
c.Enye indlela yokupakisha mhlawumbi yamkelwe emva kokuqinisekiswa
Indlela yeNtlawulo:T/T,Advance TT,Paypal Etc.
Sigxininise kule ntsimi iminyaka emininzi kwaye sinamava amaninzi kwi-mesh yocingo kunye nocingo lwentsimbi.Zonke iimveliso zethu zenziwe ngekhwalithi ephezulu yezinto eziphathekayo.Iifektri eziphathekayo zikufuphi kwi-factory yethu.Iisampulu zibonelelwa kwaye ii-odolo zovavanyo ezincinci zingamkelwa. emva kokuqinisekisa.Ixabiso lethu lifanelekile.Singathanda ukugcina umgangatho ophezulu kubo bonke abathengi abavela kwihlabathi lonke.
Ngaphambili: Umnatha wocingo olwenziwayo oMngxuma oHexagonal
Okulandelayo: PVC Coated evuthelwe Hexagonal Wire Netting Chicken & Poultry Mesh
Pvc Coated Wire Mesh Ucingo
Imiqulu ye-Pvc efakwe kwi-wire Mesh
I-Pvc yokuNatha iMesh
I-PVC iqatywe umnatha wocingo olune-hexagonal